यौन / स्वास्थ्य – DhankutaKhabar
‘जानकी आँखा अस्पताल’मा भारतीय नागरिकको घुइँचो
धनुषा, ५ माघ । जनकपुरस्थित जानकी आँखा अस्पतालमा जाडो बढेसँगै आँखा उपचार गराउन आउने बिरामीको चाप बढेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका ज्यादाजसो भारतीय नागरिक नेपालमा सस्तोमा उपचार हुने भएकाले … Read More... एकै गाविसका पैँतिस जनामा ‘सिकल सेल’ रोग देखा पर्यो
कोहलपुर (बाँके), ४ माघ । बाँकेको टिटिहिरीया गाविसका ३५ व्यक्तिमा ‘सिकल सेल’ रोग देखा परेको छ । कोहलपुरस्थित राष्ट्रिय सेवा दल वार्षिक क्याम्पले आज बाँकेको टिटिहिरिया गाविसमा आयोजना गरेको चेतनामूलक … Read More... कम्मर दुख्ने,अनुहारको कालो दाग वा पोतो हटाउने अचुक ओखती :कालो तिल(प्रयोग विधि सहित)
कालो तिल अथवा तिलबाट प्राप्त हुने बिऊ तेल उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनुहारमा चायाँ, पोतो वा दाग, कालो धब्वा आदि आएमा त्यसलाई सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। साथै कम्मर दुख्ने रोगलाई पनि … Read More... के तपाईलाई लगातार हाई आउछ, साबधान ! यो गम्भीर रोगको संकेत पनि हुनसक्छ ?
काठमाडौं, ३ माघ । के तपाईलाई लगातार हाई आईरहेको छ । यदी आईरहेको छ भने ख्याल गर्नुहोस्, तपाईलाई गम्भिर रोगको संकेत पनि हुनसक्छ । सामान्य त हाई आउँदा हामी निन्द्रा … Read More... कागतीलाई पैतालामा लगाउनुले यस्ता फाइदै फाइदा
एजेन्सी । जाडो मौसममा पैताला फुट्ने समस्या धेरैमा देखिने गर्दछ । पैताला नफुटोस् भन्ने धेरै चाहाना पनि हुन्छ । तर तपाईलाई सायद थाहा छैन होला एक कागतीले फुटेको पैताला ठिक … Read More... ७ घरेलु टिप्स,जसले तपाँइलाइ जाडो र सर्दीबाट जोगाउछ
२ , माघ । जाडो महिना शुरु भइसकेको छ । काठमाडौ लगायत देशभर जाडो बढ्दैछ । बिषेश गरि जाडोमा हामिले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै ध्यान पुराउनु पर्दछ । जाडो महिनामा कयौ … Read More... एउटा जिल्लामा एचआइभी सङ्क्रमित तीन सयभन्दा बढी
पाल्पा, २ माघ । एचआइभीबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या यहाँ तीन सय पाँच रहेको छ । जिल्लामा हालसम्म एक सय ६२ महिला र एक सय ४३ पुरुष एचआइभी सङ्क्रमित रहेको बताइएको छ … Read More... Posts navigation